Inqubomgomo yobumfihlo - Micro-Semiconductor.com
Sawubona Ndwendwe! Micro-Semiconductor.com
I-RFQ / Quote
I-Micro-Semiconductor.com ivikela imininingwane yakho yangasese, futhi ungayidaluli, uyiqashe noma uyithengisele abantu besithathu.
Ungavakashela iwebsite yethu ngaphandle kokusitshela ukuthi ungubani noma usinikeze imininingwane ethile ngawe. Lapho usufuna ukucela ikhotheshini, udinga ukugcwalisa ifomu lethu lesicelo ukuthola eminye imininingwane. Uma ukhetha ukusinikeza imininingwane yomuntu siqu, isiza sethu siqoqa kuphela imininingwane enikezwa izivakashi ngokuzithandela. Sizoqoqa futhi sigcine imininingwane yomuntu elandelayo:
Ikheli le-imeyili, imininingwane yokuxhumana, ukuze uphendule imibuzo
Imininingwane yezezimali, izinombolo ze-akhawunti yasebhange, ukucubungula ama-oda wokuthenga
Ukuthumela, ukukhokhisa noma olunye ulwazi ukuthumela izinto ezi-odiwe
Olunye ulwazi, kufaka phakathi imininingwane ejwayelekile ye-log web kanye nekheli le-IP labasebenzisi
Uyemukelwa ku-Micro-Semiconductor.com. Kwa-Micro-Semiconductor.com, ukuvikelwa kwakho kwemfihlo nokwaziswa komuntu siqu kuphathwa ngenhlonipho enkulu. Isitatimende esilandelayo sizokwazisa ngendlela esisebenzisa futhi siphatha ngayo imininingwane esiyiqoqile. Ngaso sonke isikhathi uma uvakashela i-Micro-Semiconductor.com, iseva yethu ibona ngokuzenzakalela bese ifaka ikheli lakho le-IP ngokuzenzekelayo. Ikheli le-IP ngokuyisisekelo ikheli lekhompyutha elenza isicelo kwi-web server. Akukho lwazi lomuntu siqu noma imininingwane etholakala kulokhu kushintshaniswa kwedatha — isiphequluli sesivakashi asakhelwanga ukuhlinzeka lolu lwazi.
Kwa-Micro-Semiconductor.com, amakheli we-IP wezivakashi abuyekezwa futhi ahlaziywe ngezikhathi ezithile ngenhloso yokuqapha, nokwenza ngcono iwebhusayithi yethu kuphela, futhi ngeke kwabelwane ngayo ngaphandle kwe-Micro-Semiconductor.com. Ngesikhathi sokuvakashela iwebhusayithi, singakucela imininingwane yokuxhumana (ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, inombolo yefeksi namakheli wokuthumela / wokukhokha). Lolu lwazi luqoqwa ngokuzithandela — futhi kuphela ngemvume yakho.
I-Micro-Semiconductor.com iqukethe okuqukethwe, izinsizakalo, ukukhangisa nezinye izinto ezixhumanisa newebhusayithi eqhutshwa abantu besithathu. Asinakukwazi ukulawula imininingwane yomuntu eqoqwe yilezi zingosi, futhi asinacala ngokunemba nokuqukethwe yilawa masayithi.
Lo mbhalo ubhekisa kuphela ekusetshenzisweni nasekuvezweni kolwazi oluqoqwe yithi, izinqubomgomo ezahlukahlukene zingafaka isicelo kubantu besithathu. I-Micro-Semiconductor.com ayilawuli amanye amasayithi, futhi le Nqubomgomo Yobumfihlo ayisebenzi kubo. Sikukhuthaza ukuthi ubheke kuzinqubomgomo zobumfihlo zalabo bantu besithathu lapho kufanele khona.
Amakhukhi amafayili wombhalo alula abekwe kwi-hard drive yakho, futhi aphephe njengayo yonke enye idatha egcinwe kwikhompyutha. Amakhukhi enziwa ngamawebhusayithi futhi asetshenziselwa ukugcina idatha ukuze isivakashi sibe lula. Ikhukhi ngeke isetshenziswe yiwebhusayithi ngaphandle kwaleyo eyidalile, noma ifunde idatha kusuka kwikhompyutha yakho ngaphandle kwedatha egcinwe kuyo. Idatha esikhetha ukuyigcina kumakhukhi ethu ingahle ingafaki imininingwane yezezimali, imininingwane yokuxhumana, noma enye idatha yomuntu siqu nebucayi. Isiza sethu sisebenzisa amakhukhi ukukhumbula okuthandwa izivakashi zethu ukuletha okuqukethwe abakudinga ngqo.
Sinelungelo lokwenza ushintsho kunqubomgomo yethu yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini.
Thola izinto ezisezingeni eliphakeme ze-elektroniki ngentengo ephansi kwa-Micro-Semiconductor.com
* Sicela ugcwalise ifomu lokufuna njengoba lingezansi
Ikheli: Unit 13 14F Lippo Sun Plaza 28 Canton Road Tsim Sha Tsui, KLN, Hong Kong
I-copyright © 2020 Umsabalalisi Onokwethenjelwa Wezinto Zombane info@Micro-Semiconductors.hk